Ogaden News Agency (ONA) – Eeydu ha ciyaan geediguna ha socdo تسيــــــــر القــــافلـــــــة والكـــــــلاب تنبـــــــــــح
Eeydu ha ciyaan geediguna ha socdo تسيــــــــر القــــافلـــــــة والكـــــــلاب تنبـــــــــــح
Posted by ONA Admin	/ September 13, 2011
Safaarada Itoobiya ee magaalada London ayaa maalmahanba waxay la wareegayaan suuqaqa magaalada London waraaqo la leeyahay waa (Petition) oo la doonayo in laga saxiixo dadka Somaliyeed ee u dhashay wadanka Ogadenya.
waxaa ku lifaaqan warqadda mid ah (cover letter) oo safaaradda ay qortay oo waxyaabaha ku qoran ay ka mid yihiin;
Waxaan halkan ka cadaynayaa anigoo ah muwaadain u dhashay Itoobiya kansoojeeda gobalka Soomalida ee loo yaqaano Ogadenya
inuuna ka jirin wadan kayaga wax dhib ah sida,
• xidhxidh aan shariciga wafaqsanayn
• nabadgaliyo daro
• iyo dagaal toona
Waxay intaas ku daraysaa warqadda in arinta ah tacadiyada ay buunbuuniyaan nabaddiidka wadankanagana Itobiya ee horumarka uu ka socdo balse ay nabadiidku ka soo horjeedaan.
Waxaa loogu talagalay warqadda (petition-ka) in lagu beeniyo barmaamujkii BBC News-night ee wagii dhawayd laga laga daawaday caalamka, waxaana loo talagalay in lagu taageero waraaqahani waraysigii Abdirashid dulane ee ahaa waa been barmaamujkani.
Waa iskuday ay hadhaysay doqonnimo, sababtoo ah caalamka maanta kama qarsoona waxa ka dhacaya Ogadenya, waxay ka mid tahay un arintan taariikh xumada shaqsigan. Caalamka maanta oo noqday tuula yar oo la wada dagan yahay ayuu shaqsigan u raran KT Meles moodayaa inuu ku dafiri karo gabdhaha walaaladii ah ee la taahaya nabaradii ay gaadhsiiyeen ciidanka Itobiya ee meel walba ka diiwaan gasghan dhibaatadii loo gaystay.
Waxyaabaha laga soo sheegay inuu yidhi waxaa ka mid ah; inay arintani beentahay oo aan dhibaato loo gaysan gabdhaha Ogadenya dhakhsa ayaan iniidnku keeni doonaa cadaynteeda. Cadayntii uu keeni lahaana waxay noqotay waraaqahan uu leeyahay waxaan ka saxiixayaa Somalida daggan London. Barnaamijkan lagu fulinayo ina Duulane oo sirdoonka Wayaanaha ay soo qorsheeyeen waxay muujinaysaa culayska isa soo taraya ee la saaray Itobiya ee jaaliyadaheena ay abaabulayaan say caalamka u horkeenaan dambiyada laga galayo shacabkooda.
Ugu dambayntii, geedigu wuu socon ayduna ha ciyaan .. القــــافلـــــــة تسيــــــــر والكـــــــلاب تنبـــــــــــح sababtoo ah Itobiya waxay ka soo saartey dalka Ogadenya dhamaan haya’dihii samafalka, waxayna ka mamnuucday inay tagaan guddigii QM ee loogu talagalay inay soo hubsadaan xadgudubka ka socda Ogadenya. Sidoo kale Saxaafadda caalamka ayaa la ogsoonyahay in aanay gali karin Ogadenya. Arimahaasoo idil laguma beenin karo Wah-Wahda safaaradda Itobiya ee London.
No More Silent Cry in Ogadeniya is the Motto of the Diaspora
ali ayre says:
walahi waa ina duulane laftiisi oo dhaga leh
kkkkkkkkkkkk war fool xumaa cabdi rashiid dulane alla du doori ducana wayba noqotaa
nuur abdi says:
in sha alaah xaqaa gulaysan kan iyo kuwa lamidka ah ay iyo dayeeraba way yihiin
hayska ciyaana halgan kuna hasocdo aa khir kana maxkamad ayaa lakeeni haduu ebe idmo
GEEDIGUNA WUU SOCON EEYDUNA HA CIYAAN WAA CABDI RASHIID DUULANE RAFLE OO DHAB AH KKKKKKKKKKKKK ILAAHAY HANAGA QABTO INJIREEYDA QINDHICILKEEDA LA SOCDA TAHNKZ DHAMAAN HEER OGADENYA JWXO GUUL
war waaa wax lalayabo nin gabdhohoodii gaaladu kufsatay dafiraya miyayna dayuusnimo ahyn waxaasu ilaahay xaqa dil;aaciyo warkaa hakajawaabo maalin maalmaha kamaida
Welldone halkaa ka sii wada
waa run geedigu wuu socon ayduna ha iska cidu
Ogaadeenyana way xoroobi
Nin daad qaaday, xunbo cuskay!!!!!
تسير القافلة والكلاب تنبح kkkkkk, waa cajiib, haa wuu socon geedigu, Eeyduna ama ha cido ama ha carab laad-laadiso.
ina Duulane kuwa aan damiirka lahayn un buu ka mid yahay, alla yaa wax u sheega!